Militariga Itoobiya oo hawlgal qorsheysan ka fuliyay dalka Kenya – AfmoNews
Ciidamada Militariga Itoobiya ayaa hawlgal gaar ahi ka fuliyay Magaalada Mooyaale ee qaybta Kenya, iyagoona ka soo qab qabtay dad ay Xukuumadda Addis Ababa eedeymo u haysato.
Ciidamada Itoobiya ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii ka tallaabay xuduudda labada dal, waxaana la sheegay in hawlgal aan la’iska caabin ay ka fuliyeen Mooyaale, Kenya. Militariga Itoobiya ayaa halkaasi ka soo qabqabtay toban nin, oo dhalinyaro u badan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in Militariga Itoobiya ay in muddo ahba dadkaasi ka baadigoobayeen halkaasi, markii dambena ay u suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan, isla-markaana ay kala gudbeen xuduudda.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen inaanay taasi wax falcelin ah ka bixin Ciidamada Kenya, gaar ahaan kuwooda ka hawlgala xadka labadaasi dal.
Wararka ayaa sheegaya in dadkaasi loo haysto in ay gacan siinayeen, oo ay qarinayeen xubno ka tirsan Jabhadda Oromada ee OLF, oo loo haysto weerar ay ka fuliyeen dalka Itoobiya, laguna dilay lixdan qof, sidoo kale waxay dab qabadsiiyeen illaa labaatan guri. Weerarkan ayaa horaantii bishan ka dhacay Waqooyiga Itoobiya.
OLF (Oromo Liberation Front) ayaa ka mid ahayd kooxihii mucaaradka ee kal hore qaar ka mid ah xubnahooda laga musaafuriyay dalkaasi, oo Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed uu u ogolaaday inay dalka dib ugu soo laabtaan, markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2018.
Dagaalo ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka socday xuduudda labada dal, iyadoo Ciidamada Militariga Itoobiya ay hawlgalo ka dhan ah Jabhadda OLF ka wadaan koonfurta iyo galbeedka dalkaasi.
Dowladaha Itoobiya iyo Kenya ayaan weli ka hadlin hawlgalka qorsheysan ee dhalinyaradaasi looga soo qabqabtay Mooyaale, Kenya.